अशोक कुमार कुँवर
के तपाईलाई बीमाको पोलिसी बिक्री ज्ञानमा आधारित हुन्छ जस्तो लाग्छ ? वा भनौं के तपाईं धेरै ज्ञान भएकै आधारमा एक सफल बिमा अभिकर्ता बन्‍न सक्नुहुन्छ ?
तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मेरो विचारमा केवल ती पेशाहरू ज्ञानमा मात्र आधारित हुन्छन् जसलाई सामान्यतया कुनै मार्केटिङ्गको आवश्यकता पर्दैन, जसमा एक सन्तुष्‍ट ग्राहकले अर्कोलाई सहयोग पुर्‍याउँछ वा खाँचो परेको कुनै व्यक्तिले आफैं भेटाउँछ ।
तपाईंले एक कानुन व्यवसायीले गम्भीर दोषीले मलाई सम्पर्क गर्नुहोला भनेर आफ्नै विज्ञापन गरेको त पक्कै देख्‍नुभएको छैन होला । त्यसले व्यक्तिहरुलाई जब न्यायलय जानु अगाडि वकिलको आवश्यकता पर्दछ तब उनीहरु आफैंले वकिलको खोजी गर्ने गर्दछन् ।
यस्ता विषयहरुको मार्केटिङ्गसँग कुनै सरोकार नै हुँदैन । अर्कोतर्फ, सबैभन्दा सफल र प्रख्यात बीमा अभिकर्तालाई पनि नयाँ ग्राहकले आफैंले सम्पर्क गरी मेरो बीमा गराइदिनुस् भनेर भनेको हुँदैन । बिमा ब्यक्तिले सिधै कम्पनि खोज्दै गएर गर्ने उदाहरण धेरै कम हुन्छ ।
जीवन बीमाको पेशा ज्ञानमा मात्र आधारित हुँदैन । यसको लागि औसत ज्ञान, गहन सोचाइ र लगनशीलताको पनि आवश्यकता पर्दछ । औसत ज्ञानको अर्थ यो हो कि तपाईले कसरी नीति बनाउने भन्‍ने कुरा जान्‍न आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी बीमा प्रिमियम र मृत्युदर तालिका बीचको सम्बन्ध के छ ? मृत्युदर कसरी जीवनशैलीबाट प्रभावित हुन्छ ? देशको आयु प्रत्याशा के हो आदि इत्यादि । तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने हामीसँग औसतभन्दा पनि कम ज्ञान छ ।
जीवन बीमाको पेशामा सफलता हासिल हुने कुरा गतिविधिको स्तरमा निर्भर गर्दछ । मतलब यो हो कि ग्राहकले कहिले पनि अभिकर्तालाई बिमा पोलिसी किन्‍नको लागि सम्पर्क गर्दैनन् बरु अभिकर्ता आफैंले ग्राहकहरु खोज्‍नुपर्छ ।
यही प्रसङ्गमा म एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको बिषय सम्झन चाहेँ । ‌ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट देशको सबैभन्दा बुद्धिमान मानिसहरुमध्यकै एक मानिन्थ्यो । ऊ केवल एउटा मात्र बिमा पोलिसी बिक्री गर्न सक्षम रह्‍यो र उसले आफ्नो बिमा गर्न पाउने इजाजतपत्र नवीकरण पनि गरेन । अतः उसको इजाजतपत्र रद्द भयो । किनभने ऊ कहिल्यै पनि मार्केटिङ्गमा गएको थिएन, र उसको घरमै पुगेर बीमाको परामर्श लिने पनि कोही थिएनन् । जसले गर्दा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएर पनि उ सँग बिमा पोलिसी बिक्री गर्ने बिक्रीकलाको अभाव थियो ।
आजको दिनमा बिमा अभिकर्ताको अगाडि प्रमुख चुनौती भनेको सहि समयमा सही व्यक्तिकहाँ पुग्नु हो, जसका कारण बिमा पोलिसी बिक्री हुन्छ । समस्या यो हो कि उसलाई सही समय कुन हो ? र सहि व्यक्ति को हो ? भनेर ज्ञान हुँदैन । यो सबै अवसरहरूमा पनि निर्भर गर्दछ ।
त्यसैकारण मानिसहरूलाई नियमित भेट्ने क्रम जारी राखेमा सही व्यक्तिहरुका बारेमा स्वतः ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ । यदि यस्तो नहुने हो भने तपाईं एउटा पनि बिमा पोलिसी बिक्री गर्न सक्षम हुनुहुने छैन । यो अवस्था त्यस्तै हो ।
एकपटक धेरै मानिसहरू एकसाथ दौडिरहेका थिए । त्यसैक्रममा एकजना दर्शकले अर्कोलाई सोधे, ती सबै मानिस किन दौडिरहेका छन् ? त्यस व्यक्तिले जवाफ दियो की दौडिने मध्य ‘विजेताले पुरस्कार पाउँछ, त्यसैले ।’
त्यसपछि उसले थप प्रश्‍न गर्‍यो, ‘त्यसोभए अरु किन दौडिरहेका छन् त ?’ यसको अर्थ हो ती अरुलाई कहाँसम्म दौडने थाहा नै छैन । बिमा बिक्री पनि त्यस्तै कुरा हो । कहाँ बन्द हुनेछ थाहा छैन तर दौडिनै पर्दछ, एकठाउँमा पक्कै पुगिनेछ ।
प्रत्येक दिन कुनै न कुनै व्यक्ति तपाईको लागि कहिँ पर्खिरहेको छ । यदि तपाईं उसलाई भेट्न जानुहुन्‍न भने कि त उसले जीवन बीमा किन्‍न सक्षम हुँदैन, वा कुनै अन्य अभिकर्ताले सही समयमा बीमा बेच्‍न पुग्‍नेछ ।
तपाईको काम भनेको धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूलाई भेट्नु हो । जब धेरै मानिसलाई भेटेर बिमाको बिषयमा बुझाउनु हुनेछ वर्षको अन्त्यमा तपाईले विश्लेषण गर्नुपर्छ कि तपाईले कति जनालाई भेट्नु भयो ? ती मध्ये एकतिहाइले बिमापोलिसी लिए भने पनि तपाई सफल मानिनुहुन्छ ।
तपाईले अभिकर्ताको रुपमा कुनै पनि स्तरको सफलता हासिल गर्न सक्नु भनेको समाजमा बिमाको जागरण ल्याउनु र मानिसको भौतिक क्षतिमा उसको परिवारलाई थोरै भएपनि योगदान गर्नु हो । त्यसैले आजै तपाईं सफल अभिकर्ता बन्ने हो भने यो कुरा सँधै मन मस्तिष्कमा राख्नुस की मानिसहरू बिमा खोज्दै आफैं तपाईसँग आउँदैनन्, तपाईं आफैं उनीहरुलाई खोज्दै जानुपर्छ ।